Ngabe lukhona usuku olunaka izono zomhlaba?
Usuku Lwesono Lomhlaba? Ngavuma ngekhanda, ngabe lukhona ngempela usuku lokunaka izono zomhlaba? Kodwa njengoba ngangiqhubeka ngiseshela ku-inthanethi, ngabona ukuthi ngangifunde okungalungile.
Usuku Lwesono Lomhlaba?
Kwesinye isikhathi kushesha kancane lapho ufunda. Ngokuphazima kweso, lapho ngafuna izinsuku ezinetimu online, ngabona ukuthi kukhona usuku lwengqikithi engingakaze ngilubone noma ngilwazi ngalo ngaphambili: Usuku Lwesono Lomhlaba .
Ngavuma ngekhanda, ngabe lukhona ngempela usuku lokunaka izono zomhlaba? Kodwa njengoba ngangiqhubeka ngiseshela ku-inthanethi, ngabona ukuthi ngangifunde okungalungile.
Akukhona kuzisebenzi zomhlaba inqwaba ngosuku kodwa kuzisebenzi zomhlaba sight- suku.
IWorld Sight Day , noma iWorld Sight Day, uLwesine wesibili ngo-Okthoba minyaka yonke kanti ihlose ukugqamisa nokusabalalisa ulwazi ngempilo yamehlo, ukungaboni kanye nokukhubazeka okubonakalayo.
Iqiniso lesono lisobala
Kepha kuthiwani uma belukhona ngempela usuku lapho umuntu enaka izono zomhlaba - isintu? Iqiniso lesono lisobala kuwo wonke umuntu - kumane kubheke emhlabeni wonke. Ukucekelwa phansi kwesono kushiya imikhondo esabekayo.
Abantu kuzodingeka baqonde kancane isono. Wonke umuntu uyayibona imiphumela yesono, kepha hhayi wonke umuntu obona ubuqiniso besono. Futhi akuwona wonke umuntu ofuna ukuzizwa ukuthi uyizoni.
Wonke umuntu wonile
IBhayibheli lisho ngokweqiniso ukuthi bonke bonile futhi bayasilela enkazimulweni kaNkulunkulu. Iphinde ithi uma sithi asinasono kusho ukuthi siyazikhohlisa.
Kepha akumele sigcine ngokuqaphela isono, kepha futhi kufanele sazi ngoJesu owathwala izono zethu ngokufa kwakhe esiphambanweni seKalvari. Lapho sithola uJesu futhi sikholwa kuye nakulokho akwenzile, sizosindiswa futhi sixolelwe zonke izono zethu!
Sazi uJesu owathwala izono zethu
Kufanele sazi ngesono sethu nokungafaneleki kodwa futhi sazi nalowo owathwala isono sethu ukusisindisa nokusisindisa.
Sidinga uJesu ngoba siyizoni - hhayi ngoba silungile. Futhi nguJesu othethelela izono zethu.
Isono sami sithethelelwe
Esinye sezizathu esenza ngisindiswe futhi ngilondolozwe ngemuva kweminyaka engaka ekukholweni kwami ​​eNkosini uJesu ukuthi ngangixolela izono zami.
Futhi ngathethelelwa ngenxa yomusa kaNkulunkulu, hhayi ngenxa yokulunga kwami ​​- ngoba ngangingenakho! Ngasindiswa ngoba ngaphandle kukaJesu Kristu ngangiyisoni.
UJesu Kristu uyaphila namuhla. Uvukile kwabafileyo. Futhi lapho umamukela ngokukholwa, uzosindiswa futhi usindiswe futhi zonke izono zakho zithethelelwe!